Mita ọkụ: Ibu Ule Ule Maka Ndị Mmepe | Martech Zone
BlazeMita na-enye ndị mmepe ihe nnwale nnwale ibu iji mepụta ọnọdụ onye ọrụ ọ bụla maka ngwa weebụ, websaịtị, ngwa mkpanaka ma ọ bụ ọrụ weebụ, enwere ike ịbawanye site na 1,000 ruo 300,000 + ndị ọrụ jikọrọ ọnụ. Nnwale ule dị oke mkpa maka saịtị na ngwa ebe ọ bụ na ọtụtụ na-eme nke ọma n'okpuru mmepe, mana na-agbagha n'okpuru nsogbu nke ndị ọrụ na-emekọrịta ihe.
BlazeMeter na-enyere ndị mmepe na ndị nrụpụta arụmọrụ metrik aka ịmata ngwa ngwa ụdị ụdị ibu weebụ gị
na saịtị mkpanaka ma ọ bụ ngwa nwere ike ijikwa. Atụmatụ BlazeMeter gụnyere:
Enweghị mkpọchi mkpọchi - dakọtara na JMeter nke Apache n'ihi ya, ọ bụghị proprietary technology. Jiri ederede JMeter ma ọ bụ ngwa mgbakwunye ọ bụla na-enweghị mkpa maka mgbanwe ọ bụla.
Mmezi Ego - enweghị ntọala ma ọ bụ nrụnye achọrọ ebe ọ bụ nyocha igwe arụmọrụ.
Akpaka Scalability - nwalee ndị ọrụ 300, 3,000 ma ọ bụ 300,000+. Teknụzụ na-eweta ihe na-akpaghị aka na-achọ, sava raara onwe ya nye maka ule ọ bụla.
Ọrụ onwe & On-ina - Ọ dịghị ogologo ahịa-okirikiri ma ọ bụ na-enye ihe onwunwe tupu oge achọrọ. Nweta ohere a na - akọwaghị ikike nyocha a na - akparaghị ókè 24/7.
Nlekota oru Ngwa - Nyochaa arụmọrụ arụmọrụ zuru ezu (APM) maka data arụmọrụ nke ngwa ngwa iji chọpụta ma nyochaa obere arụmọrụ.
Mmekọrịta - Njikọ APM na ọnụọgụ ọkwa kachasị elu dịka New Relic nye visibiliti na ngwụcha maka sava, ngwa (web na mobile), yana nlebanye ahụmịhe onye ọrụ. Mmekọrịta gụnyere Jenkins CI (CloudBees), Bamboo (Atlassian), TeamCity (JetBrains), JMeter Plugin na ndị ọzọ.
Comprehensive Protocol Nkwado na Advanced Scripting ikike - mepụta ule dị mgbagwoju anya nke na-eme ezigbo ọrụ onye ọrụ na saịtị ma ọ bụ ngwa gị.
Ibu Ibu Ezigbo Ihe na Ezi Server - mepụta ndị ọbịa site na ọtụtụ ọnọdụ mpaghara n'otu oge ma kesaa ibu gafere ọtụtụ sava iji tinye ọrụ nhazi.
Nkwado ekwentị - nwalee ma mobile ngwa ọdịnala na weebụsaịtị na mobile ngwaọrụ ndekọ. Zoo nke ọma ịrụ ọrụ mkpanaka na ngbasa ozi mkpanaka ekwentị.
Ezigbo mkparịta ụka mmekọrịta oge - lee ma foto onyonyo ma ọkwa ogo larịị nke na - ekpesa mmiri mmiri.
Tags: jmeter nke apachengwaNleba Arụ Ọrụatlassianacharaoku okuigwe ojii nke dabeere na nnwale nnwaleígwé ojiijenkins ciụgbọ mmirijmitaNkwụsịnnwale ibumobile ngwa ibu uleule ibu ulesaasotunyocha ngwa ngwa weebụ